कमरेड माला (कथा) – Chitwan Post
कुनै बेला बन्दुक बोकेर परिवर्तनको नाउँ जप्दै जंगल पसेको कमरेड पर्वत आज आफ्नो एक वर्षको छोरालाई दूधदानीबाट दूध पिलाइरहेछ । सामाजिक रुपान्तरणको अभ्यासमा मातृवात्सल्य गुमाएको छोरालाई आमाको न्यानो काखको तिर्सना मेटाउँदै आएको उसलाई आफ्नै जीवन रंगीन पर्दाजस्तो लाग्छ । अबोध छोराको अनुसार नियाल्दा जनयुद्धमा जंगल पसेका पलहरु एकपछि अर्को गरी सिनेमाका दृश्यझैँ मस्तिष्कमा झुल्किन आइपुग्छ । समाजवाद, साम्यवाद, सामाजिक रुपान्तरण, सर्वहारा वर्गको उन्नतिको नारा लिएर बन्दुक चलाएका हातहरुमा अझै बन्दुकका डामहरु मेटिएका छैनन् । तिनै हात आज आफ्नो अबोध छोरालाई दूध पिलाउन बाध्य छ ।
उसको मस्तिष्कमा जनयुद्धका सम्झनाहरु महासागर बनेर बग्न थाल्छन् । पर्वतजस्तो आफ्नो मनलाई अर्काे विशाल पर्वतले थिचेको भान हुन थाल्छ । सर्वहारा वर्गको उन्नतिका लागि विद्रोहको मैदानमा उत्रिएको ऊ आफ्नै आँखाअगाडि निर्दोष बाबुको हत्या भएको र कलिली बहिनीको अस्तित्व हावामा विलीन बनाइँदा पनि न्याय नलेखिएको कानुनमा न्याय खोज्न जनयुद्धमा होमिएको थियो ।
नामजस्तै पर्वत शिरमा बोक्न सक्ने साहस थियो, जोश–जाँगर र उत्साह पनि । बुढेसकालको लट्ठी एउटा छोरो जंगलमा रातदिन दुश्मनको निशाना बन्दा पनि उसकी आमा छोराले समाजमा अन्यायको बादल फोरेर न्यायको घाम ल्याऊला भन्ने कुरामा विश्वस्त थिइन् । कमरेड पर्वतको सोधखोज गर्न दैलोमा रातदिन आमा र बहिनीलाई दैलोमा घेरा हाल्थे । उनीहरुका नजरमा पर्वत, आमा, बहिनी सबै शंकाको रेखामा थिए । बहिनी चमेली सोधपुछका लागि राज्यले लगेको महिनादिनसम्म पनि बेखबर थिई ।
कमरेड पर्वत लडाइँको मोर्चामा चुनौती सामना गर्दै प्राण हत्केलामा राखेर अगाडि बढिरह्यो । मुटुभरि नेपाल आमा बोकेर रगतको थोपा–थोपामा देश बोकेर । नसा–नसामा देशको माया लिएर हिँडेको ऊ जन्म दिने आमाबाट टाढा, माया गर्ने बहिनीबाट टाढा हुन विवश थियो । आफ्ना कति सहकर्मी गुमायो त कति बेपत्ता पारिए, तर पनि ऊ निरन्तर अघि बढिरह्यो । यसै क्रममा उसको मन कमरेड आभासँग गाँसिन पुग्यो । पाइला–पाइलामा दुश्मनको आक्रमणबाट होसियार बन्नुपर्ने यस्तो परिस्थितिमा पनि कमरेड पर्वत र आभाको प्रेम भने मौलाइरहेको थियो । काँडाबीच च्यापिएर पीडामा फुल्दाको फूलले जति मुस्कान र सुवास पस्किरहेको हुन्छ, त्यस्तै अटुट सुवास र मुस्कान थियो उनीहरुको प्रेममा पनि । प्रेम, देश र समाज परिवर्तन एकसाथ बोकेर हिँडेका उनीहरुले प्रेमलाई पूर्णता दिन विवाह नामको संसारमा बाँधिने र मुक्तिका खातिर एकसाथ हिँड्ने निर्णय गरेर पार्टीसमक्ष प्रस्ताव राखे ।
प्रेमजस्तो महान् चीजलाई रोक्न सक्ने सामथ्र्य संसारमा कसको हुन्छ र ? पार्टीले उनीहरुको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै बिहेको मिति तोकिदियो । तर, बिहे हुनु एक साताअघि नै राज्यसँगको दोहोरो भिडन्तमा कमरेड आभाले शहादत प्राप्त गरिन् । प्रेमको फूल नफुल्दै उनी उडिन् मुक्तिको आवाज गुञ्जाएर । पाइला–पाइलामा मृत्यु बोकेर हिँड्दाको अवस्था, अझ त्यसमा पनि जीवनभर साथ दिने वाचा गरेकी प्रेमिकासँग नयाँ जीवनको सुरूवात नहुँदै अस्ताएको पीडा सहेर पनि पर्वत दौडिरह्यो, सामन्तवादको अन्त्यष्टिका लागि । प्रेमिकाको शोकलाई शक्तिमा रुपान्तरण गर्दै उनको बलिदान मुटुमा बोकेर ऊ हिँडिरह्यो स्वतन्त्रताको गोरेटो खोज्न ।
प्रेमिकाको वियोग सहेर युद्ध मैदानमा हिँडिरहेको उसमा जोश सेलाएका थिएनन्, रहरहरु निदाएका थिएनन्, पाइलाहरु एकरत्ति पनि थाकेका थिएनन् । युद्धका हरेक मोर्चाहरुमा ऊ भिड्दै गयो । यसै क्रममा उसको भेट अर्की सहकर्मी कमरेड मालासँग भयो । समाज परिवर्तनको खातिर क्रान्तिको पथमा लम्किरहेका दुवैको मन प्रेमको रापमा जल्न थाल्यो । प्रेम फुल्न कुनै सुन्दर फूलबारी चाहिन्न, जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहीँ सुन्दर फूलबारी बन्छ भनेझैँ दुवैको प्रेमको फूलबारी युद्धमोर्चा थियो । मुटुमा एकअर्काप्रतिको प्रेम र माटोप्रतिको आस्था बोकेर जीवनमा धेरै युद्ध लडे उनीहरुले ।
एकदिन सुरक्षाकर्मीको घेरामा धेरै साथीहरु परे, त्यसमा कमरेड माला पनि थिइन् । चरम यातना त कहिले सान्त्वनाका शब्दहरुको जालमा पारेर धेरैपटक आत्मसमर्पण गर्न र साथीहरुको वास्तविकता ओकल्न दबाब पार्दा पनि कमरेड मालाले आत्मसमर्पणको बाटो रोजिनन् । देशको खातिर प्राण आहुति दिने मुटु छ मसँग, माटोको कसम खाएको छु स्वतन्त्रताको बीउ उमार्ने, माटोसँग विश्वासघातको दाग लगाएर जिउनु महानता होइन जस्ता उनका जोशिला शब्दले राज्यका पहरेदारको मुटुमा उनीप्रति क्रोधको किल्ला गाड्थ्यो र बर्सन थाल्थे, पशुशैलीका यातना उनीमाथि । शारीरिक र मानसिक दुवै यातनाले आफ्ना पक्षमा ल्याउन नसकेपछि नयाँ जाल रच्न थाले उनीहरु । शासन र सत्ताको टेकोमा उभिएर कमरेड मालाको बन्दी अवस्थामा शरीर गिजोल्न थाले एक समूह । शरीर गिजोलेर जीर्ण भयो उनको तर भाग्य भन्नुपर्छ, जीवनलीला समाप्त हुनबाट भने उनी जोगिइन् ।
देशको राजनीतिक अवस्थामा सुधार आयो, युद्ध रोकियो र शान्ति सम्झौता भयो । मालाजस्ता धेरैले बन्दी जीवनबाट मुक्ति पाए । शारीरिक र मानसिक यातना भोगेर लामो समयपछि बन्दी जीवनबाट बाहिर संसारमा निस्केकी मालाको प्रेमी कमरेड पर्वतसँग मिलन हुन पाउँदा खुसीको सीमा रहेन । बन्दी जीवनमा गुज्रेको अस्तित्व फर्काउन नसके पनि न्यायका लागि आवाज भने तीव्र पारेकी थिई । मालाको साँचो प्रेममा गाँसिएको उनीहरुको मायामा कुनै कमी थिएन, पहिलेको भन्दा पनि । उसले मालाको शरीरसँग भन्दा पनि भावनासँग प्रेम ग¥यो, त्यसैले चुँडिएको उनको अस्तित्वले पर्वतको मायाको डोरी चुँडाल्न सकेन । आफ्नो गुमेको अस्तित्वले बेलाबेलामा मस्तिष्कमा झट्का दिँदा उनी छट्पटाउँथिन् वेदनाले । पर्वत उसलाई सान्त्वना दिन्थ्यो । पर्वतको मायामा भुलेर उसले आफ्ना सारा दुःख भुलेकी थिई ।
प्रेमलाई जीवन्त पार्न दुवैले विवाहको बाटो अँगाले । पर्वतले मालालाई लिएर आफ्नो झुपडीतिर पाइला चाल्यो । धेरै वर्षपछि आफू जन्मेको गाउँमा पाइला टेक्दा उसको मनमा खुसीको सीमा थिएन । आमाले छोराबुहारी एकसाथ देखेर खुसी हुनुहुन्छ होला, बहिनी पनि ठूली भइहोली अब त जस्ता कुरा मनमा खेलाउँदै घरतिर अघि बढ्यो । ऊ घर पुग्यो । घर ठिंग उभिएको थियो, मात्र ढल्न बाँकी थियो । भत्कने हालतमा पुगेको घर जताततै मुसा, चराले गुँड लगाएको र जङ्गलजस्तो घाँसले ढाकिएको देख्दा ऊ छक्क प¥यो ।
यताउति आमालाई हे¥यो र बहिनीलाई खोज्यो, नभेटेपछि छिमेकीसँग सोधपुछ ग¥यो । छिमेकीका मुखबाट उसले थाहा पायो, आमालाई आफ्नो बारेमा सोधखोज गर्न आउनेहरुले यातना दिएको र त्यसैका कारणले मृत्यु भएको, बहिनीलाई पनि सोधपुछका लागि ब्यारेक लगेर उतैबाट बेपत्ता पारिएको । आफ्नो परिवारको त्यस्ता कुरा सुनेर उसको हृदयमा ज्वालामुखी उर्लियो र ऊ थचक्क दैलोमा बस्यो । घर छाड्दा समाज परिवर्तन गर्छु, सर्वहारा वर्गको उत्थान गर्छु भनेको प्रतिज्ञा सम्झेर ऊ धेरै मर्माहत भयो । मनैदेखि आमा र बहिनीलाई सम्झेर श्रद्धा–सुमन व्यक्त ग¥यो ।
जीर्ण घर सजाउँदै कमरेड पर्वत र कमरेड मालाले आफ्नो जीवन पनि सजाउँदै गए । क्रान्तिको बाटोमा होमिएका दुवैको काँधमा अब घरपरिवार, समाज र देश सबैको जिम्मेवारी थपिएको थियो । समाजले बिस्तारै मालाको अतीत थाहा पाएपछि बिटुलिएकी आइमाई भनेर परिचर्चा गर्न थाल्यो । त्यसैले, उसको मन अमिलो हुन्थ्यो । समाज रुपान्तरणका लागि लडेको आफैँले समाजको अपहेलना सहनुप¥यो । समाज रुपान्तरण गर्न सकिनँ भन्ने हीनताबोधले मालालाई भित्रभित्रै पोल्न थाल्यो । मायाको सुन्दर चिनोस्वरुप छोराको आगमनले जिम्मेवारी थपिएकोमा दुवै अत्यन्त खुसी थिए । बेलाबेलामा समाजले बिहेअघि फौजीद्वारा अस्तित्व लुटिएकी भनेर अपहेलित बनाउँदाको पीडाले भने मालाको मुटुमा सियोले घोचेझैँ घोच्थ्यो । तैपनि, पर्वतको जीवनसंगिनीप्रतिको सद्भाव, सान्त्वना र हौसलाले मालाको पीडामा मलम लागेको थियो ।
आफ्नो चरित्रलाई उजागर पारेर सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर लगाउने बुर्जुवा सोचाइका सम्भ्रान्त व्यक्तिहरुको शब्दले र त्यही बर्दीको आडमा कालकोठरीभित्रको शारीरिक, मानसिक यातना र अस्तित्व खोसिँदाको क्षणले उनको मस्तिष्कमा झट्का दिइरहन्थ्यो । हिजोको ती यातना त एउटा बन्द कोठामा र आफूमा मात्र सीमित थिए, तर आजको समाजको वचनरुपी यातना त सिंगो समाजमा फैलिएको छ, यसले आफूमात्र नभई लोग्ने र अबोध छोराको भविष्यमाथि पनि संकट उत्पन्न गरेको छ । आजको समाजमा यो अपहेलित शब्दको बाण सहनुभन्दा हिजोको त्यो बन्दी जीवनको यातना साह्रै न्यून रहेछ भन्ने बोध हुन थाल्यो मालालाई । समाजको शब्दको बाण धेरै धारिलो हुँदोरहेछ, त्यही धारिलो वचनले छियाछिया बनेको मालाको हृदयमा हिजोका पलहरु विषालु काँडा बनेर रोपिएका थिए ।
बन्दुकभन्दा शक्तिशाली समाज रहेछ । यही समाजको वचनका पीडाहरु मस्तिष्कमा घोपिँदा प्वाल परेका मस्तिष्कहरु विचलित भएर आफूलाई एउटा समाजभन्दा परको व्यक्तिका रुपमा सोच्न थालिन् माला । बन्दुक बोक्दाको यातनाभन्दा आज समाजको वचनको यातनाले थिलोथिलो बनेको जीवनलाई बोझ सम्झँदै सिंगो जीवनको अस्तित्व खरानी पार्न आफ्नै घरको दलिनमा फरियालाई डोरी बनाएर सधैँका लागि उनले पिङ खेलिन् । “सर्वहारा वर्गको उत्थान, समाजवाद, सामाजिक रुपान्तरणको सिद्धान्त बोकेर बन्दुक समातेका मेरा हातभन्दा शक्तिशाली यो समाजको वचन हुँदोरहेछ, सामाजिक रुपान्तरणको मेरो लडाइँमा असफल बनेर एउटा बेकम्मा र उपेक्षित जीवन जिउनु व्यर्थ छ, त्यसैले कमरेड पर्वत ! म हारेर जीवन जिउन सक्दिनँ । हाम्रो प्यारो अबोध छोरालाई समाज रुपान्तरणको लडाइँमा सफल योद्धा बनाउने जिम्मेवारी छाडेर जाँदैछु र मेरो आत्माले सधैँ समाज रुपान्तरण खोजिरहने छ । जय सामाजिक रुपान्तरण र सर्वहारा वर्गको उत्थान ! जस्ता शब्दले भरिएका कागजका पाना फरियाको एक छेउमा उनीसँगै झुन्डिरहेको थियो ।
आज पनि त्यो कागजको टुक्रा मालाको आत्माजस्तै समाज रुपान्तरण र सर्वहारा वर्गको उत्थानका लागि भौँतारिरहेको छ ।